Xiddigaha Dhaawacyada Ka Soo Laabtay, Inaysan Jamaahiirta Dhafrin Habeenka Sabtida & Waxyaabihii Xiisaha Lahaa Ee Macalinka Liverpool Jurgen Klopp Uga Hadlay Shirkiisa Jaraa'id Ee Maanta | Laacib.net
Xiddigaha Dhaawacyada Ka Soo Laabtay, Inaysan Jamaahiirta Dhafrin Habeenka Sabtida & Waxyaabihii Xiisaha Lahaa Ee Macalinka Liverpool Jurgen Klopp Uga Hadlay Shirkiisa Jaraa’id Ee Maanta
09-11-2018 Saed Balaleti 1
Tababare Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Jordan Henderson, Joe Gomez iyo xiddiga khadka dhexe Naby Keita inay taam u yihiin kulanka Fulham ee Premier League. Waxaana uu ka hadlay muhiimada uu kabtanka kooxda Henderson u leeyahay kooxda.
“Marka uusan Jordan joogin mar walba waanu tabnaa.” ayuu yiri Klopp.
“Waan jeclaan lahaa inaan dhaho Hendo ayaa wax ka bedeli lahaa ciyaarteenii Red Star Belgrade laakiin ciyaartaas oo dhan ayaa qariib aheyd. Kulankii Arsenal ee ka horeeyay waxay aheyd ciyaar okay ah.
“Inta badan ciyaartoyda khadka dhexe oo dhan waa taam marka laga reebo Oxlade-Chamberlain. Waxaan kaliya u baahanahay inaan go’aan ka gaarno cida ciyaareysa waxaana ay ku xiran tahay heerka taam ahaanshadooda, qaab ciyaareedkooda iyo jir ahaan sida ay yihiin.”
Klopp ayaa wax laga weydiiyay ceebtii ka soo gaartay kooxdiisa kulankii Champions League ee ay guuldarada 2-0 kala kulmeen kooxda Red Star Belgrade, waxaana uu yiri:
“Kulankii Talaadada lama uusan mid aheyn kii Sabtida ee Arsenal, dhibaato xoog leh ayaan wajahnay. Wax weyn kama dhigayo guuldaradaas laakiin xaqiiqda ayaa ah inaanan u dabaaldegin qaab ciyaareed fiican muddo shan maalmood ah.
“Ciyaartoyda waxaan doonayaa inaan jawaab ka bixiyaan kulankii Talaadada laakiin Axada waa tartan ka duwan kii Talaadada.
“Red Star ma ahan sida Maribor ay aheyd sannadkii hore. Waxa ay gadaal dhigteen seddex daafac, jawigana waxa uu ahaa mid aad uga duwan kii gurigeena.
“Horumar waan sameyn karnaa, mar walbana xaalku waa sidaas. Kaliya labo kulan oo xun ayaa ina soo martay Red Star iyo Napoli. Laakiin kubadeena ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan waxa ay aheyd mid lagu najaxay.”
Tababare Klopp ayaa uga digay taageerayaasha soo xaadiraya Anfield duhurnimada Axada inaysan dhafrin habeenka Sabtida. Isagoo yiri:
“Madaama kulanka la ciyaarayo 12ka duhurnimo, fadlan xilli hore seexda habeenka Sabtida si Anfield aad u timaadaan adinkoo caaboon.
“Haddii uu jiro qof filanaya in kulan sahlan ay noqon doonto kulanka Fulham waxaan ku dhihi lahaa fadlan gurigaaga iska joog.
“Waxaan dooneynaa inaan jawaab bixino taasi waa sax laakiin waa inay noqoto jawaabta haboon.”
Klopp ayaa ka hadlay dadka dhaleeceynaya kooxdiisa, waxana uu yiri: “Xaqiiqdii waxaan nahay kuwa hami leh, waxaana doonaynaa inaan qaadano wax walba oo aan heli karno. Waxaan heysanaa 27 dhibcood. Marka aan kulan badino waa inaan dhano waan ka xunahay uma aanan badinin sida City, waan idiin fahmay.
“Xilli ciyaareedkeena Premier League ilaa iyo haatan waa mid lagu najaxay laakiin sidaasi looma dareemayo labo sababood aawadeed, kubada qurxoon ee la ciyaarao iyo xaqiiqda ah in City iyo Chelsea ay xoogan yihiin”
Jurgn Klopp ayaa lagu wargeliyay in kooxdiisa aan rigoore loogu dhigin garoonkooda Anfield muddo ka badan sannad, waxaana uu ku jawaab celiyay:
“Bilowgii xilli ciyaareedka waxaa ina soo martay hal ama labo xaalad oo aan nasiib ku laheyn go’aanada garsooraha.
“Kulankii Arsenal iyo goolkii Cardiff, goolkii Cardiff waxa uu ahaa garab dhaaf (offside). Cidna ima weydiinin ciyaarta ka dib haddii uu goolkaas ahaa offside.
“Kulankii Arsenal waxaan dhalinay gool cad. Ciyaarta ka dibna waxaan iri waxa kaliya ee la qori doono ayaa ah in Klopp uu yiri goolkaas sax ayuu ahaa. Kumaa xiiseynaya waxa aan iraahdo?
“Kulamada aan ku ciyaarnay gurigeena dhibco badan ma aanan dhuminin. Cid aan dhaleeceyneyno ma jirto. Waa qasab inaan xerada goolka tagno mar walba.”
Yaxye Axmed Cabdulle says:
09-11-2018 at 2:41 pm
Klopp hadaladisa wa kuwa saxan mar marka qar ado fican aya nasiibku ka hiliya mana ahan wx ino gara in nala dhaleceyo hadanu nahay reds wayo kox walba aya caqabad lakulanto marki lagaraco uma jojin dono dodalkena sanadan madama hamigenu mel sare yahay wa inan ka mira dhalina sida an guula badan ugari lahayn